नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकामा काठमाडौं ताहाचलका सुजन शाक्यको गोली हानी हत्या, अर्का गोली लागि घाइते भएका ललितपुर गावाहालका रोजिन मुल्मीको अमेरिकामै उपचार हुँदै !
अमेरिकामा काठमाडौं ताहाचलका सुजन शाक्यको गोली हानी हत्या, अर्का गोली लागि घाइते भएका ललितपुर गावाहालका रोजिन मुल्मीको अमेरिकामै उपचार हुँदै !
Prichard police investigate shooting at gas station
काठमाडौं ताहाचलका सुजन शाक्यको अमेरिकामा हत्या भएको छ भने अर्का एक नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन् । अमेरिकाको अलबामा राज्यको मोवाइल भन्ने ठाउँमा ग्यास स्टेशनमा काम गर्ने २५ वर्षिय सुजन शाक्यको नचिनेका मान्छेको समूहले गोली हानी हत्या गरेको उहाँका दाजु सुदीप शाक्यले जानकारी दिनुभयो । अर्का गोली लागि घाइते भएका ललितपुर गावाहालका रोजिन मुल्मीको अमेरिकामै उपचार भइरहेको छ । ग्यास स्टेशन को विजुलीको लाइन काटेर आक्रमण भएको सुदीपले जानकारी दिनुभयो । लुटेराहरुले उहाँहरुको साथमा रहेको २ हजार अमेरिकी डलर पनि लुटेर लगेका छन् । डिभी परेर अमेरिका पुगेका सुजन साढे २ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको थियो ।